राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा ओली र नेपाल दुबै पक्षको दाबेदारी भएपछी वाम गठबन्धनमा खैलाबैला !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा ओली र नेपाल दुबै पक्षको दाबेदारी भएपछी वाम गठबन्धनमा खैलाबैला !
काठमाडौँ – राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका लागि आज सोमबार मनोनयन दर्ता हुँदैछ। एमालेको भागमा परेको सो पदमा कसलाई पठाउने भनेर एमालेले आजै निर्णय गर्दैछ। तर, वाम गठबन्धनको सहमतिअनुसार एमालेको भागमा परेको यो पद कसलाई दिने भन्ने निर्णय गर्न एमालेलाई सहज नभएको कारण खैलाबैला मच्चिएको हो ।
एमालेभित्र सो पदका लागि दुई आकांक्षी देखिएका छन्, गणेश तिमिल्सिना र पर्शुमेघी गुरुङ। गृहजिल्ला पर्वत भएका तिमिल्सिना गण्डक–धौलागिरीका पुराना कम्युनिष्ट नेता हुन् भने लामो संसदीय अभ्यास गरेका गुरुङ संखुवासभाका। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष तिमिल्सिना कि गुरुङ? भन्ने निर्णय गर्न अप्ठेरो पर्नुको कारण चाहिँ उनीहरुको पुरानो राजनीतिक पृष्ठभूमि होइन।
बरु एमालेको गुटगत राजनीतिमा उनीहरु फरक फरक गुटका हुनु र त्यो गुटले प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हो। जस्तो, गुरुङ बरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधर हुन् भने तिमिल्सिना अध्यक्ष ओली निकट मानिन्छन्। ओली आफै प्रधानमन्त्री रहेका बेला राष्ट्रपति पनि उनी पक्षधर नै विद्या भण्डारी हुँदैछिन्।
उपराष्ट्रपति र सभामुख भने माओवादी केन्द्रको भागमा परिसकेको छ। यो स्थितिमा बरिष्ठ नेता नेपालले आफ्नो पक्षले के जिम्मेवारी पाउने भन्ने प्रश्न उठाउनु स्वभाविक हो।त्यसैले, बाँकी रहेको यो जिम्मेवारीका लागि ओली–नेपाल दुबै पक्षले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा नाम छनोट गर्न एमालेलाई अप्ठेरो परेको छ।
कांग्रेसलाई बलियो बनाउन नेता शाहले पेस गरे प्रस्ताव
सहयोद्धाबाटै प्रचण्डमाथि कडा प्रहार ! डाँका र धोकेबाज भन्ने को हुन् हिम्मतिला कम्युनिस्ट ?
यी हुन् कांग्रेसका भीआइपी ‘भिलेन’, आधाभन्दा धेरै महासमिति सदस्यहरुको मन दुखाए
महासमिति सदस्यहरुको सुझावले कांग्रेसीहरुलाई दियो शक्ति, बन्दसत्र भित्र अचम्मको रौनक